I-Hangzhou Yolanda yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kweli, i-LTD
Yolanda Fitness, esekwe kwi 2010, ngoku inemizi-mveliso emikhulu emi-3 engaphezulu kwe 500abasebenzi. Ukusukela oko sasekwa, besigxile kwiimveliso eziphucula ubomi. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, besijolise kwicandelo lempahla eyolukiweyo kwaye sibonelela ngeenkonzo ezingaphezulu800 abathengi baphesheya.
Yolanda Fitness, eyasekwa ngo-2010
Ngoku kukho iifektri ezi-3 ezinkulu ezinabasebenzi abangaphezulu kwama-500
Inikwe iinkonzo kubathengi abangaphezulu kwama-800 baphesheya.
Emva kwempumelelo yeemveliso zamalaphu asekhaya, ngoku sijolise kwiimveliso zokomelela komzimba, ezinceda iimbaleki ezininzi ukuba zizive zinempilo kwaye zikhululekile kumava obomi. Ngoku sandisa umgca wemveliso kwaye sivelisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokuqina kwimarike.
Apha eYolanda Fitness sizibophezele ekwenzeni ukusebenza ekhaya kube lula. Ngokubonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zokubamba izindlu, sikwenza kube lula kuwe ukufumana umzimba wakho ulungile kwaye uqinile. Yithi ndlela-ntle kweziya zilishumi elinesihlanu zongezelelekileyo osokolayo ukuphulukana nazo kwaye molo ukungabikho kwesinyithi ngesixhobo sethu esimangalisayo nesicacileyo. Ubomi buzaliswe ngamahla ndinyuka kunye noxinzelelo kunye noxinzelelo. Ukuzivocavoca ngoyena ndoqo kuphuculo lwendalo ngokukwazi kwayo ukukhupha ii-endorphins ngexesha lokuzilolonga kwakho.
Eyona nkqubo yethu iphambili yemveliso yenza ukuba izixhobo zikaYolanda Fitness zifikeleleke kuwo wonke umntu njengoko sikholelwa ukuba umzimba ophilileyo ukhokelela kwingqondo esempilweni kwaye umntu ngamnye kufanelekile ukuba afumane uxolo lwangaphakathi. Yiyo loo nto uYolanda Fitness elapha ukuze azokunceda kunye neemfuno zakho zomthambo.
Siphakamisa "umgangatho wokuqala, inkonzo yokuqala", sikhonza abathengi kwihlabathi liphela.
Ngo-2010: Incopho yeKuang yaqala uYolanda endlwini yakhe
Ngo-2011: U-Yolanda waqeshisa i-ofisi yakhe yokuqala e-Hangzhou, Zhejiang
Ngo-2012: Umzi-mveliso wokuqala wokuvelisa wawusakhiwa
Ngo-2013: Ukuba neqela lomntu eli-100
Ngo-2014: Umzi mveliso wesibini wokuvelisa wawusenzelwa ukwenza iimveliso zokomelela komzimba
I-2015: hit injongo yokuba neqela lomntu le-300 kunye ne-100 yezigidi zeedola zaseMelika ekujolise kuzo
Ngo-2016: imali yokuthengisa ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeedola zaseMelika
Ngo-2017: Fudukela kwikomkhulu elitsha ngaphezulu kwe-4000m2
Ngo-2018: Imali yokuthengisa engaphezu kwezigidi ezingama-250 zeedola zaseMelika
2019: Umzi mveliso wesithathu Ukwakhiwa
Ngo-2020: UYolanda wabetha amalungu eqela angama-500